မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: စိတ်ကြိုက် မြန်မာ့အရေး အမြင်တစ်ခုကို ဆားချက်ခြင်း
ကျနော် သဘောကျမိတဲ့ စာတစ်စုကို ဖေ့ဘွတ်ကနေကူးပြီး ပို့စ်အဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ် ။
ပထမတော့ လင့်လောက်ပဲချိတ်ပြီးညွှန်မလို့က မူရင်းနေရာရှာမရတာမို့ ခုလိုလုပ်လိုက်ရတာပါ ။
ဒါ့ပြင် ကွန်မန့်လာပေးကြတာတွေထဲက အကျိုးရှိမယ် ထင်တာလေး တချို့တဝက်ကိုလည်း သီး
သန့်ကွန်မန့်တွေအဖြစ်နဲ့ အောက်မှာ ပြန်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရေးသူက ဦးရော်နီညိမ်းဖြစ်
ပြီး ရဲသူရိန်မင်းရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ကူးယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
﻿မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးတွေကို မူကြိုကနေ ကျောင်းပြန်တက်ကြပါ (ဦးရော်နီညိမ်း)
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ အပိုင်း (၁) က စလွဲနေလို့၊ ကျန် အပိုင်းအားလုံးရဲ့ အလွဲတွေတော့မပြော
စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလ တလျှောက်လုံး အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်အုပ်စုက မြန်မာပြည်က
ဦးနုကို အထင်မကြီးဘူး။ ဦးနုဟာ တိုင်းပြည်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူး။ ဦးနုလို လူမျိုးနဲ့ စစ်
အေးရဲ့ အထွဋ်အထိပ်အချိန်မှာ၊ မြန်မာပြည်ဟာ ကွန်မြူနစ်အောက် အချိန်မရွေး ရောက်သွားနိုင်တယ်
လို့ အနောက်အုပ်စုက သဘောထားခဲ့တာပါ။ အာဏာရှင်တွေ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေဆိုပြီး နိုင်ငံတွေ
ကို စစ်အေးကာလမှာ အနောက်အုပ်စုက ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကွန်မြူနစ်ကို တိုက်နေရင်၊ သူတို့က ထောက်
ခံနေမှာပဲ။ အနောက်အုပ်စုက ဦးနေ၀င်းကိုပဲ အထင်ကြီးတယ်။ သူ့ဟာသူ ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ အုပ်ချုပ်၊ ဦး
နေ၀င်းကမှ တိုင်းပြည်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့၊ အနောက်က သဘောထားတယ်။ ဒါပေ
မယ့် ဦးနေ၀င်းက လည်တော့၊ အနောက်အုပ်စုရဲ့ တပည့်မွေးတာတော့ မခံဘူး။ အမွေးခံ လိုက်ရင်
ဆရာဖြစ်တဲ့ အနောက်အုပ်စုက သူ့ကို မလိုချင်တော့တဲ့နေ့၊ သူဖြုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်တို့
လို သူ့အောက်က ဗိုလ်ချုပ် တယောက်ယောက်ကို မြှောက်ပေးပြီး၊ သူ့ကို ရှင်းပစ်လိုက်မှာဆိုတာ သူသိ
တယ်။ နမူနာ တွေကလည်း ရှိပြီးသား။ ၁၉၆၀ အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ တောင်ဗီယက်နမ်မှာ အာဏာရှင်
ငိုဒင်ဇင်၊ သူ့ညီ ငိုဒင်နုနဲ့ မဒမ်နု လင်မယား တို့ကို အမေရိကန်က မွေးထားပြီး၊ မလိုချင်တော့တဲ့ အခါ
ကျတော့၊ သူ့အောက်က တောင်ဗီယက် နမ်စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကို မြှောက်ပေးပြီး အာဏာသိမ်း
ခိုင်းရုံတင်မက အသေပါ သတ်ခိုင်းလို့၊ တောင်ဗီယက်နမ် မှာ ငိုဒင်ဇင်တို့ ဆွေမျိုးတသိုက် အသတ်ပါ
ခံရပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ငုယင်ဗန်သီယူး အာဏာ သိမ်းထားလိုက်တာ၊ ၁၉၇၅ မြောက်ဗီယက်နမ်ကို စစ်
အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်အစိုးရမှာ စစ်အေးကာလမှာ ကိုယ့်ဘက်ကလူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကြိုက် မ
ဟုတ်တော့ရင် လုပ်ကြံရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ ပေါ်လစီရှိတယ်။ ရန်သူဘက်ကိုလည်း လုပ်ကြံတာပဲ။ ကွန်
ဂိုက ကွန်မြူနစ်သမ္မတ ပက်ထရစ်လူမန်းဘားကို စီအိုင်အေ လုပ်ကြံခဲ့တယ်။ ချေဂွေဗားရားကို ဘိုလီ
ဗီးယား စစ်တပ်က အရှင်မိတော့လည်း၊ ချက်ချင်းမသတ်ပဲ တရားရုံးတင် သေဒဏ်ပေးရင် ရသားနဲ့၊
နိုင်ငံတကာမှာ သူရဲကောင်း လိုဖြစ်နေတဲ့ ချေဂွေဗားရား ခွေးသေ၀က်သေ သေရတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ
ကိုပြဖို့ စီအိုင်အေက ဘိုလီဗီးယား စစ်တပ်ကို ချေဂွေဗားရားကို ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ တောထဲက စစ်စခန်း
ထဲမှာတင် သေနပ်ပစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ သတ်ခိုင်းခဲ့တာပဲ။ ချေဂွေဗားရား အစစ်ဆိုတာ သက်သေထူနိုင်ဖို့၊ ချေ
ရဲ့လက်တဘက်ကို ဖြတ်ယူလာခိုင်းပြီး၊ ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တောထဲမှာပဲမြှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ဦးနေ၀င်း
က ဒါတွေကို နောကြေနေလို့ သူ့ဟာသူ ဗကပကို တိုက်ပေမယ့်၊ အနောက်က လာလုံးတာကိုတော့
မခံဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် စဉ်းစားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတွက်ပါ။
ဦးနုကြီး ၁၉၇၄ မှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်လို့၊ အမေရိကားမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်း
တာမှာ၊ ဒီနေ့ အမေရိကားမှာ မြန်မာဆိုရင် ချီးပေါသေးပေါ ပေးနေတဲ့၊ ခိုလှုံခွင့်၊ ဦးနုကို အမေရိကန်က
မပေးဘူး။ ဦးနေ၀င်း ငြိုငြင်မှာ စိုးလို့။ ဦးနုက သူ့ကို အမေရိကန်က လက်မခံတော့၊ လက်ခံတဲ့ အိန္ဒိယ
မှာ သွားနေရတာပဲ။ တခါ ဦးနုက နိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ဘူး ဘာသာရေးပဲလုပ်မယ် ဆိုပြီး၊ ၁၉၈၀ အ
စောပိုင်းမှာ ပိဋိကတ်သုံးပုံ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ဖို့ နိုင်ငံခြားခရီး ထွက်တယ်။ အမေရိကန်သွားဖို့
ဗီဇာလျှောက်တော့၊ ရန်ကုန် အမေရိကန်သံရုံးက ထောက်လှမ်းရေး မျက်မှန်တင်ဦးက တဆင့်၊ ဦးနု
ကို ဗီဇာပေးလိုက်ရမလားလို့။ ဦးနေ၀င်းကို မေးခိုင်းတယ်။ ဦးနေ၀င်းက ပေးလိုက်ပါ ဆိုမှ၊ ဦးနု ဗီဇာရ
သွားတာ။ ဦးနေ၀င်းက ဘယ်သူမဆို နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး သူ့ကို ပုန်ကန်ရင် သိပ်ကြိုက်တယ်။ ပြည်တွင်း
မှာ ပုန်ကန်ရင် ဖမ်းရ ဆီးရ ထောင်ချရနဲ့၊ သူ့မှာ နံမည်ပျက်တယ်။ နိုင်ငံခြားထွက် သူ့ကို ပုန်ကန်ဖို့
လုပ်ရင် ပထမ စားတ်နေရေး ရပ်တည်ရေး လုံးပမ်းရတဲ့ နေရာမှာတင်၊ ပြဿနာတွေ စတွေ့မယ်။
နောက်ပြီးရင် မြန်မာပီပီ တယောက်နဲ့တယောက် ဆရာကြီးလုပ်ရင်း ကွဲကြပြဲကြနဲ့၊ နောက်ဆုံးတော့
ပုန်ကန်မယ့်သူတွေ သူ့ကို မပုန်ကန်နိုင်ပဲ ပြည်ပမှာပဲ လုံးပါးပါးသွားကြမယ် ဆိုတာ၊ ဦးနေ၀င်း သိပြီး
သား။ ဂျပန်ပြန် ဦးနေ၀င်းက ဒါတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ။ တရုတ်ပြည် အမွိုင်မြို့မှာ သောင်တင်နေတဲ့
သခင်အောင်ဆန်းနဲ့ သခင်လှမြိုင်တို့ လုံးပါးပါး ခါနီး၊ ဂျပန်စစ်တပ်က လာခေါ်သွား လို့သာ၊ ဟန်ကျ
သွားတာ ဦးနေ၀င်းက သဘောပေါက်ပြီးသား။
ဒါကြောင့် စစ်တပ်ကြီးတခုခု နိုင်ငံအစိုးရတခုခုက ကျောထောက်နောက်ခံပေးမယ့် ပုန်ကန်လိုသူ
တွေမဟုတ်ရင် (ဒီနေ့ထိလည်း ဒါမျိုး သူပုန် မရှိခဲ့ပါ)၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ကြိုက်သလောက်ထွက်။ ဦးနေ
၀င်းက ကြိုက်တယ်။ ရှစ်လေးလုံးကာလ ကျောင်းသား ငါးသောင်းလောက် မြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေကနေ
ထိုင်းနယ်စပ်ကို တောခိုနေကြတာ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးထားတာပဲ။ နှစ်နည်းနည်း ကြာလာရင် ဒီ
ကျောင်းသားတွေရဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဟာ၊ ဦးနုရဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလိုပဲ
ဖြစ်သွားမှာပဲ ဆိုတာ၊ ဦးနေ၀င်းလို လူလည်ကြီးရဲ့ တပည့်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အဲဒီတုန်းက မသိပဲ နေပါ့
မလား။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေ တောခိုဘို့ သွားနေရင်း လမ်းမှာ အဖမ်းခံကြရတယ်ဆိုတာ မရှိ
သလောက်ပဲ။ တောခိုကျောင်းသား မှန်သမျှ သေဘောပိုးလို တနေရာရာလောက်တော့ ရောက်သွား
ကြတာချည့်ပဲ။ ဒီကျောင်းသားတွေ မြို့ပေါ်မှာ ဆန္ဒတွေပြနေ ကြလို့၊ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတော့ လူမြင်ကွင်း
မှာ သေကုန်ကြတော့၊ ဦးနေ၀င်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ ရှုံးတာပေါ့။ စစ်ပညာ မတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတပ်
ကို တောထဲမှာ အလွယ်တကူရှာပြီး ချေမှူန်းလိုက်တာက၊ တိုင်းပြည်က မသိ၊ ကမ္ဘာက မသိပဲ သတ်
ခွင့်လိုင်စင် ရထားတာမျိုး။ ဦးနေ၀င်းက ဒါမျိုး ကြိုက်တာ။ ဦးနုကိစ္စ ပြန်ဆက်ရရင် လက်နက်ကိုင်
တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၉- ၁၉၇၄ တုန်းကလည်း အမေရိကန်က ဦးနုကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်၊
တပြားမှလည်း ပေးတာမဟုတ်။ Nation သတင်းစာထုတ်ခဲ့တဲ့ ဦးလောရုံက သူနဲ့ သိတဲ့ ကနေဒါသတ္ထု
တွင်း ပိုင်ရှင်တယောက်ကို ဦးနုရဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ သူ့ကိုပဲ သတ္ထုရှာခွင့်
ပေးမယ်။ တခြားနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို ရှာခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ မစားရ ၀ခမန်း ကတိနဲ့၊ ဒေါ်လာ ၂
သန်းလောက်ရအောင် တောင်းနိုင်ခဲ့တာပဲ ရှိတယ်။ ဦးနု လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ အချိန်
မှာ၊ အမေရိကန်ကို စိတ်ကောက်နေတဲ့ ဦးနေ၀င်းကို၊ အမေရိကန်က လိုက်ချော့နေတယ်လေ။ စစ်
လက် နက်ပစ္စည်းတွေ ရဟတ်ယာဉ်တွေ အတင်း လိုက်ပေးနေတယ်။ ဒါတွေကို အခု ဗွီအိုအေက
စနေနေ့တိုင်းလွှင့်နေတဲ့ စစ်သားစကားပြောခန်းကနေ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ ပြန်ပြောပြနေပြီ။
ဦးနုကို အမေရိကန်နဲ့ အနောက်အုပ်စုက ဘယ်တုန်းကမှ အထင်မကြီးဘူး။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်း
အမေရိကန်ဗီဇာရလို့ ပိဋိကတ်သုံးပုံ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ဖို့ အမေရိကား ရောက်လာတော့ လည်း၊
ဦးတင်မောင်ဝင်းတို့က ဦးနုကို နိုင်ငံရေး ပြန်လုပ်ဖို့ ပြောကြတော့၊ ဦးနုက ခါးခါး သည်းသည်းပဲ ငြင်းခဲ့
တယ်။ သူ့အခြေအနေ သူသိလို့။ ဦးတင်မောင်ဝင်း ဒါတွေ သူ့စာအုပ်ထဲ ရေးထားတာပဲ။ ဒါကြောင့် ဦး
နု ရှစ်လေးလုံးမှာ အစိုးရဖွဲ့တော့ ၀ိုင်းမထောက်ခံကြလို့၊ ဦးနု အစိုးရကို နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေက အသိ
အမှတ်မပြုကြဘူးလို့၊ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ရီချင်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲ မှာသာ လွတ်လပ်ရေးရ
အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး၊ နောက်ဆုံး တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဆိုပြီး ကိုယ့်တိုင်းသူ ပြည်သား
တွေက သဘောထားတာ။ စစ်အေးကာလမှာ ဦးနုလိုလူမျိုးကို အနောက်အုပ်စုက ဦးလူပေါလို့ သ
ဘောထားတာ။ ဘယ်လိုလုပ် ရှစ်လေးလုံးမှာ၊ သူအစိုးရဖွဲ့ တာကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုမှာ
လဲ။ ဦးနုက ဘာမပြောညာမပြော ဘယ်သူ့မှ မတိုင်ပင်၊ သူဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်
အသိမပေးပဲ လုပ်ချလိုက်တော့၊ အဲဒီ ဦးနု အစိုးရအဖွဲ့ထဲကနေ ဦးနုကို မျက်နှာနာနေတဲ့ ဦးဝမ်ကို
ဟောကြီးက လွဲရင်၊ ရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နားလည်နေတဲ့ လူတွေက
ဦးနုဆီက အကုန်ပြေးကုန်ကြတာပဲ။ သတ္တိမရှိလို့ မဟုတ်ဘူး။ ဦးလူပေါ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ပါလို့ မဖြစ်ဘူး
တကယ်တမ်းမှာ ရှစ်လေးလုံးကနေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင်၊ ဘယ်သူက အောင်အောင် မြင်မြင်
ဦးဆောင်နိုင်မှာလဲ၊ ရှစ်လေးလုံးလဲ မအောင၊် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကတော့ ပြုတ်ကျနဲ့၊ ဗကပတွေ အာဏာ
ရသွား နိုင်တာကို၊ အမေရိကန်က ကြောက်တာပေါ့။ ရှစ်လေးလုံး စတာနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ဒေါ်စုနား
သွားကပ်ကုန်ပြီဆိုတာ သူတို့လဲ သိတာပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်က မနှစ်က ကွယ်လွန်
သွားတဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ် စတီဗင်ဆိုလာ့ဇ်ကို လွှတ်ပြီး ဒေါက်တာမောင်မောင် အပါအ၀င်
ဦးနုတို့ ဦးအောင်ကြီးတို့ ဒေါ်စုတို့နဲ့ လာစကားပြောပြီး တောက်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့။ စတီဗင်ဆို လာ့ဇ်က
အဲဒီတုန်းက အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးရာ ဆပ်ကော်မ
တီရဲ့ ဥက္ကဌ။ သူ့အလုပ် သူလာလုပ်တာပေါ့။ သူက အမေရိကန်လွှတ်တော်က ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခိုင်း
ခဲ့လို့ မြောက်ကိုရီးယား ကင်အီဆွန်း၊ အီရတ် ဆဒမ်ဟူစိန်တို့နဲ့ပါ သွားစကားပြောဘူးတဲ့ လူ။ မြန်မာ
ပြည်က ရှစ်လေးလုံးအချိန် အခြေအနေမှန်ကို သဘောပေါက်လာခဲ့တာပေါ့။ အမေရိကန် အောက်
လွှတ်တော်ကို ပြန်ပြီး အစီရင်ခံတာက၊ ဘယ်သူမှ မြန်မာပြည်မှာ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုကနေ အ
ပြောင်းအလဲဖြစ်လာအောင် တကယ်တမ်း ခေါင်းမဆောင် နိုင်ဘူး။ ဦးနုတို့ ဒေါ်စုတို့ အာဏာရရင်
သိပ်မကြာဘူး၊ ကွန်မြူနစ်တွေပဲ အာဏာ လက်ပြောင်း ယူသွားလိမ့်မယ်။ ဒေါ်စုကတော့ အတွေ့အ
ကြုံ ဘာမှမရှိလို့။ ဦးနုကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ညံ့လို့။ ဦးအောင်ကြီး အာဏာရရင်တော့ ကွန်မြူနစ်
မတက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဦးအောင်ကြီးကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မထောက်ခံဘူး။ ဒါကြောင့်
အမေရိကန်က ဘာမှ သွားမရှုပ်နဲ့၊ ငြိမ်ငြိမ်လေး ပွဲကြည့်ပရိသတ်သာလုပ်၊ စစ်အေးကာလမှာ မြန်
မာစစ်တပ်က အမေရိကန်ဘက်က ရှိနေဖို့ လိုတယ်လို့ စတီဗင်ဆိုလာ့ဇ်က အစီရင်ခံခဲ့တာ။ အဲဒီအ
ချိန်မှာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်တွေ ရာနဲ့ချီပြီး အမေရိကန်မှာ သင်တန်းအမျိုးမျိုးတွေ တက်နေကြတာ ငါးနှစ်
လောက် ရှိနေပြီ။ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက် အာဏာသိမ်းပြီးမှ၊ ဒီ မြန်မာစစ်ဗိုလ်တွေကို အမေရိကန်
ကနေ အကုန်နှင်ထုတ်လိုက်တာ။ အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ် စောမောင် အစိုးရ ပြောတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ
လုပ်ပေးမယ် ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ဦးမယ် ဆိုပြီးတော့ စစ်တပ်ချင်းဆက်ဆံရေးကို အမေရိကန်အစိုး
ရနဲ့ လွှတ်တော်က ရပ်ပစ်လိုက်တာ။ အမေရိကန်စစ်တပ်က မရပ်ချင်ဘူး၊ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဆက်ဆံ
ရေး ဆက်ရှိချင်တယ်။ စစ်အေးက အဲဒီအချိန် ဘယ်ဘက်က နိုင်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိသေးဘူး။
ဆိုဗီယက်ယူနီယံက ၁၉၉၁ ကျမှ ပြိုကွဲတာ။ ရှစ်လေးလုံးအချိန် ဦးနုအစိုးရကို ပြည်တွင်းမှာ ၀ိုင်းမ
ထောက်ခံခဲ့ကြလို့၊ သူ အစိုးရဖွဲ့တာကို နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ခံမှု မရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်၊ ဦးနုအစိုးရ
ကို နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြရင်၊ အဲဒီမှာ ပွဲပြီးသွားပြီလို့ ပြောနေကြသူတွေ၊
တော်ကြပါတော့လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့။ မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးတွေကို မူကြိုကနေ ကျောင်းပြန်
** အခြား တွဲဖတ်နိုင်မယ့် လင့်လေးတွေကိုလည်း တခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီအထဲက
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကတော့ များတာမို့ အားလုံးလိုက်မစုနိုင်တော့ပါဘူး ။
- ဘိုဘိုလန်းစင် (ဘဝချင်းမတူတော့သည့် တရုတ်ပြည်) Link
- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ( စစ်ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသိုင်းကွက်) Link
- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ~ ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေး စစ်တမ်း - အပိုင်း (၁) Link
- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ~ ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေး စစ်တမ်း - အပိုင်း (၁၀) Link
Posted by မန်းကိုကို at 5/03/2011
Labels: Others' Opinion
Cho Tu Zal ... said ...
တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကို သူတို့ စူပါပါဝါ အရွှေ့အပြောင်းတွေအတွက် လိုသလို ကစားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့အနောက် စူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ကျဆုံးခန်းကလည်း အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ယုံကြည်ပါတယ်။ လို...နေတာက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုနဲ့ တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံလိုကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝဖို့ပါ။ ဒီ ၂၁ ရာစု ရဲ့ အလယ် လောက်မှာဖြစ်မလား၊ ဆုံးခါနီးမှာ ဖြစ်မလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဖြစ်တော့ဖြစ်လာမှာပါ။ အိုင်တီရယ်၊ အဲဒီ အစိုးရတွေရဲ့ သိက္ခာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မှန်သမျှ ဖွင့်ချတဲ့ ၀ီကီလိခ်ရယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှေ့ရှုမှုကနေ လူသားချင်းစာနာစိတ်ကို ရှေ့တန်းတင်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တွေ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊ အနုပညာရှင်တွေ အားလုံး၊ အသွေးရောင်၊ ကိုးကွယ်မှု၊ အရှေ့အနောက် မခွဲခြားပဲ ပေါင်းစည်းကြမယ့် ကမ္ဘာသစ်ကို ကျွန်တော်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပါတယ်။ အမေရိကဆို မျက်စိမှိတ်ပြီး ယုံကြ၊ ထောက်ခံကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေထဲက လူငယ်တွေသာ ကိုရော်နီငြိမ်းရဲ့ စာမျိုးတွေ များများ ဖတ်ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
အမေရိကရဲ့ အပေါ်ယံ ဒီမိုကရေစီ ဖုံးပြီး အတွင်းက ညစ်သမျှတွေက ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ သုံးပုံတပုံလောက်ကို ထူထောင်ပေးခဲ့တာ၊ ကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့တယ် ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်တာနဲ့ ကွန်မြူနစ်လို့ စွတ်စွဲတာကိုလည်း ကြောက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော် ကွန်မြူနစ် မဟုတ်ဘူးနော်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းစကားနဲ့ပြောရရင်
သမိုင်းကိုသိရင် မအဘူးဆိုတော့ မအတဲ့ လူလို့ပဲ ပြောပါရစေ။
April 29 at 12:30pm · Like · 23 people
Kyaw Aye ... said ...
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေကိုမြှားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဘဝတုန်း မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောကျတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒေါက်တာလွန်းဆွေ ဘလော့ဆိုပြီးနက်ပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့အခါ သဘောမကျဘူး။ လူတစ်ဦးဘဝရွေးချယ်မှုပဲ။ ဒီလိုပဲကို Ronny Nyein(ခေါ်)ကိုသောင်းငြိမ်းကုိုလည်း ဂျပန်မှာရ...ှိတုန်းတွေ့ဖူးတယ်၊ သူ့အကြောင်းတွေကြားဖူးတယ်။ စနေသားစာစောင် ဘာကြောင့်ထုတ်တာကအစ ကြားရတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုလွဏ်းဆွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ ဒီလိုပဲ ကိုသောင်းငြိမ်းဘယ်နေရက ဘာဖြစ်ဲ့တာလဲဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်းအကြောင်းကို အများသိအောင် ချပြရင်မကောင်းဘူးလား။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံအောင် သိတယ်လို့မရှိပါဘူး။ မိမိအ မြင် မိမိအယူအဆနဲ့ မတူတာနဲ့ သူများကို နှိမ်တယ်ပုတ်ခတ်တာ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေတောင် အတိုအရှည် မတူကြတာပဲဗျာ။ နိုင်ငံရေးမှာ အယူအဆမတူတာ စဉ်းစားပုံမတူတာ မဆန်းပါဘူး။ လေကြီးကြီးပြောမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူလားဗျာ။ ကိုလွဏ်းဆွေကလည်း အယ်ဒီတာဥာဏ်နဲ့မဖွပါနဲ့။ ကိုသောင်ငြိမ်းကလည်း DSA ဆင်းရေတပ်ထွက်မို့ သိတယ်တတ်တယ်ဆိုပြီး မပြောစေချင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေ ဝေဝါးမှာစိုးလို့ ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါ။ ခင်ဗျားတိုနှစ်ယောက်လုံးကို လေးစားပါတယ်။
April 29 at 4:00pm · Like ·4people
Hla Shwe ... said ...
ကိုရော်နီ ရေးတာသဘောကျတယ်။ လွပ်လပ်ရေးရပြီး ဦးနုဘာကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာ ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေ လေ့လာသင့်တယ်။ ကျနော်လည်းဦးနု အကြောင်းလေ့လာသင့်သလောက် လေ့လာဖူးတယ်။ အဲဒီလို လူဘောကြီးကို ဘာကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်တင်ခဲ့သလဲ။
ဒီနေ...့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာ လည်း အနောက်နိုင်ငငံ တွေအဖို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အားရပုံမပေါ်ဘူး။ ဒီနေ့မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးဟာလည်း အထွဌ်အထိပ်ကို ရောက်နေတယ်။ ဘယ်တုံးကမှ မကြုံဘူးတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လက်နက် ကိုင်အုံကြွမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒေါ်စု သာနိုင်မယ်ဆိုရင် အရေ့တောင်အာရှာမှာ ဘော်လကန်အရေး အခင်းလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလားလို့ သုံးသတ်မိပါတယ်။
April 29 at 4:19pm · LikeUnlike ·3people
Steven Kline ... said ...
Cho Tu Zal@ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အမေရိကန်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာ The Ugly American ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကို ပြောင်မြောက်စွာရခဲ့ပါတယ်။ စာတအုပ်ရဲ့ အမည်ကစခဲ့တယ်လို့ ကျနော့်မေမေ ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ဘူးမှတ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါ။ ပိုသိတဲ့သူများက ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ မအ တဲ့သူစာရင်းထဲပါချင်လို့။ :D
April 29 at 4:22pm · LikeUnlike ·3people
Saw Phyo Lay ... said ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ " ခင်ရာဆွေမျိုး ၊ မြိန်ရာဟင်းကောင်း" ဆိုသလို ထမင်းမြိန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်..အဲ့ဒီတော့ အဲဒီတော့..................
ဦးနုကို လူပေါအစိုးရ လို့ အနောက်အုပ်စု သတ်မှတ်တာကိုးက သူတို့ သြဇာမခံလို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ သတ်မှတ်တာပါ။ ဦးနုဟာ လူပေါမဟုတ်ဘူး။ ဦးနုကို လူပေါလို့မြင်တာ၊ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်း
က မြင်တာတော့ မဆန်းပါဘူး။ ဒါမှ သူတို့ အာဏာသိမ်းခဲ့တာကို ဆိတ်ရေ... နဲ့ဖုံးလို့ ရမှာကိုး။ ပြီးတော့ ဦးနုဟာ သမိုင်းအစဉ်အလာ ကင်းမဲ့တဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသေသွားလို့ အချောင်နေရာ ရလာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသား ဘ၀ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ထက် အသက်အားဖြင့်၊ အတန်းအားဖြင့်၊ ၀ါကြီးတဲ့ တကယ်လည်း ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၆ ဒုတိယကျောင်းသားသပိတ်တုန်းက ဦးနုဟာ ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌပါ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုနုနဲ့ကိုအောင်ဆန်းကို ထုတ်ပစ်တာက စ လို့ ဒုတိယကျောင်းသားသပိတ်ဖြစ်လာတာပါ။
အဲဒီလိုပဲ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ဦးနုဟာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးနုကို လူပေါအစိုးရလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဦးနေ၀င်းဘက်က ရပ်ပေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုကော အမှန်လို့ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်လို့ရပါ့မလား။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုမိုင်းနဲ့ခွဲပြီး ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေကို လမ်းပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်းကို ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်တာတခုထဲနဲ့ ထောက်ခံခဲ့တဲ့အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်သူလူထုအများစုအပေါ်မှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဘယ်လောက်ကင်းမဲ့နေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေတယ်။ ဒါတင်မက ကွန်မင်တန် တရုတ်ဖြူတွေ ကျူးကျော်လာတဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်ကို လက်နက်မေ၇ာင်း မထောက်ပံ့ပဲ ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အများကြီးပါ။ မျက်စိမှိတ်ပြီး အမေ၇ိကန်ကို ဆန့်ကျင်နေစရာမလိုသလို၊ မျက်စိမှိတ်ပြီး ထောက်ခံနေစရာလည်း မလိုဘူး ဆိုတာကိုသာ ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါ။ ပြီးတော့ ဦးနုကို ဦးနေ၀င်းလက်ထဲ အာဏာ အပ်တဲ့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေး စတန့်ထွင်တဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဦးနုဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စင်းလုံးချော မဟုတ်တောင် ခုခေတ် လူတွေထက်တော့ အများကြီး သာပါတယ်။ သူ့ကို လူပေါအစိုးရလို့ပြောတာကတော့ အမေရိကန်လေ၊ စစ်တပ်လေ လွှမ်းတဲ့အသံလို့ သာ မြင်ပါတယ်။
April 29 at 5:30pm · LikeUnlike · 22 people
Naing Maw Than ... said ...
R.Nyein has clarified the assumption between inland and west on PM U Nu. Ex-communist argued with Thakhin Soe for talkng so much on foreign policies, Soe replied how could be insistasmall boat to stormy wind whilst even giant ship swayed.
April 29 at 9:59pm · LikeUnlike · 1 person
Ye Thurein Min ... Commented by Zin Than .........................
8888 နေ့အတွက် အော်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းတစ်ချို့ မဆလ ပါတီဌာနချုပ်က
ဂစ်စတက်နာတွေနဲ့လှည့်ပြီး B600 မဇဒါလေးဘီးအပြာလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖြန့်နေတာ
၇.၈.၁၉၈၈... နေ့လည်ထည်းက ကျွန်တော်တို့မိထားပါတယ် ဒါကို
ယနေ့ထိထုတ်မပြောသေးပါ။ ၈၈၈၈ဆိုတာ ပြည်သူတိုက်ပွဲဆိုတာပါတယ် ဒါပေမဲ့
Ignition Point ကို ဦးနေ၀င်းကပေးပြီး Persuade Point ကို ပြည်သူကြားထဲ
မဆလ ဗဟိုကနေ ဦး ၅ ကိုင်သူတွေ က စနစ်တကျလုပ်သွားတာပါ... စုစုပေါင်း
Anarchy Period in Public ရက်ပေါင်း ၃၀နဲ့ ခြောက်နာရီတိတိ
ဘဲလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ ... ဒီအချိန်မှ ပြည်သူဟာ ဗျူဟာမြောက်
တပ်များကိုမစီးနင်းခဲ့ပါ ဥပမာ အခု လစ်ဗျားလိုပေါ့
တောင်မရောက်မြောက်မရောက် မြို့နယ်လေးများနဲ့ ရုံးများသာ စီးနင်းခံရပြိး
တောကြောင်အကြိုက် ဘဏ္ဍာတိုက်အသေးလေးတွေ စက်ရုံဂိုဒေါင်တွေကို ရှေးဦးစွာ
ဦး ၅ အမိန့်နဲ့ပစ်ဖွင့်ပေးရပါတယ် လူထုဝင်နှိုက်ပြီး လေးနာရီသာသာရှိရင်
ဥပမာပြစရာဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေးတယ်လီဖုန်းကွန်ယက်တွေ မဟာဓါတ်အားလိုင်းများဘာမှမထိပါ။
မထိအောင်လည်း လုပ်သားတွေကို ဆန်ဒပြခွင့်ပေးပါတယ်.. ဒီနေရာတွေဟာ
ကိုရော်နီလိုတာတစ်ခုရှိပါတယ်..... ဦးနုနဲ့ အက်တလီချုပ်ထားတဲ့
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးပေးဥပဒေပါ Burma Independent Act ပါ ဒါကို
ဗြိတိသျှပါလီမန်ကနေ အတည်ပြုပေးထားတာပါ ဒီဥပဒေမှာ ဦးနုလက်ထဲကို
အာဏာပြန်ရောက်စေချင်လဲရတယ် .... မရောက်အောင်လဲ လုပ်လို့ရတဲ့ ယနေ့
ဗြိတိသျှဓနသဟာယ တွေခံစားနိုင်တဲ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်ရှိပါတယ် ခင်ဗျားက
အပြင်မှာဆိုတော့ လွတ်လပ်စွာလေ့လာကြည့်ပါ အနောက်အုပ်စုရဲ့  စစ်ရေးအရ
၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ဟာ ဘယ်နှစ်အတိုင်းအတာအထိ အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှ အာမီ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ် .... ဒါကိုလည်းမြင်ကြပါ... ဒေါ်စုအနားကို
ကွန်မြူနစ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်း စနစ်တကျစီစဉ်တာပါ ဥပမာ တစ်လောက
ဆုံးသွားတဲ့ ဦးအုန်းမြင့်တို့ကို စွပ်စွဲလို့ကောင်းတာပေါ့ သူတို့က
အနီကိုးထွန်းဝေတို့လည်းဘာထူးလို့လဲဗျာ..
ဒါပေမဲ့ အခု စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့ထဲ
ကွန်မြူနစ်သားသမီးတွေ ဗြောင်ကြီးပါသလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ရာဇ၀င်ကတော့
အူပေါက်တာကြာပါပြီ ကွန်မြူနစ်တရုတ်ကြီးက ကောင်းကောင်းသိပါတယ်အနှစ် ၄၀ ကြာ
သူ့ကိုခံတိုက်ထားတဲ့ ဗမာပြည်ကို ဘယ်လိုကိုင်ရမလဲဆိုတာ အဓိကပေါ့ဗျာ
အိပ်ပျော်နေတဲ့နဂါးကြိးကို အမေရိကန်လာနိုးလိုက်တာ ဗမာပြည်က
Saturday at 1:18am · LikeUnlike ·5people
Ye Thurein Min .... Commented by Zin Than ...............
၁၉၆၅ နဲ့ ၆၉ကြား ထင်ပါတယ် အိမ်ရှေ့ကို ဦးနု ရခိုင်လေဘေးအတွက်လားမသိ အလှူလာခံပါတယ် ၀ါးကျည်တောက်ကြီး လည်ပင်းမှာဆွဲလို့ပါ ၊ သူက ကျွန်တော့အဖွားကို ကြီးကြီးစောနေကောင်းလားလို့ မေးပါတယ် ကျွန်တော့အဖွားကေ...ငွငါးကျပ်ဝါးကျည်ထောက်ထဲထည့်ပြီး မောင်နု နင်ဒါတွေစိတ်မကုန်သေးဘူးလားလို့ မေးပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာ မဆလ ပါတီစိတ်မှူး ဆိုရှယ်လစ်ဇင် ကျွန်တော့အဖေက နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုကို (ဖြောင်း)ဆို ခြေစုံပြု ဆလုရိုက်အလေးပြုပါတယ် သူက ဦးနေ၀င်းလူနော်(ပါတီကေဒါ ) ဒါပေမဲ့
နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာ သူလေးစားပြီး သူနေရာသူသိနေတယ်လေ... ဦးနုကို ဘယ်လိုပြောပြော လူထုကမထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး လက်လှမ်းမမှီတာ လေ ဦးနုပြောတာတရားနည်းလမ်းကျတယ်လေ...
ယနေ့လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကွန်မြူနစ်တရုတ်မဟာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို သူတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာ ဗမာလူထုမဲနဲ့တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ အရပ်သားခေါင်းဆောင် ဦးနုလောက် သံတမန်စကားနဲ့ ကျကျနန ပါယ်ပါယ်နယ်နယ် တွယ်နိုင်တာ ပြောဝံ့တာမရှိဘူးသေးပါ ယနေ့အထိနော် (သူမဖါးခဲ့ဘူးဗျာ )
ယနေ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုဝါးတားတားမဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ချစ်ကြည်ရေးကြည်ညွန့်ရေးတဲ့ တရုတ်ဗမာဆက်ဆံရေး သမိုင်းစာအုပ်ဖုံးအနီရောင်ပါ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း(ချောင်အင်လေး )နဲ့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုတို့အပြန်အလှန်ပြောကြတဲ့သမိုင်းဝင်တဲ့ ချစ်ကြည်ရေးမိန့်ခွန်းများကိုဖတ်ပါ။
ယနေ့ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့သူတိုင်း တပ်ထဲမှာ ဦးနုသမိုင်းကို ဖီမော်၊ဂေါ်လန်။ကန်ဖန် နယ်သုံးနယ်ကိစကို ဦးနုကြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကို ရောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ ဥနှောက်မှိုင်းတိုက်လိုက်တာကို စာပေမဖတ်ဘဲနဲ့ အာဘောင်အာရငိးသန်သန်ပြောနေကြပါတယ် .. ၀မ်းနည်းစရာပါ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို စာအုပ်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရဲ့သားနဲ့ လမ်းလှမ်းမှီနိုင်သားရဲ့ ၀ါးတားတားပြောကြတာ လူညံ့တွေပါ။
အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ယနေ့လိုတပ်မတော် ရာထူးနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဗန်းပြပြိး မိသားစုအတွက် ဂျာမဏီမှာ ထိုင်ဝမ်နဲ့ အမေရိကန်မှာကုမဏီ သွားထောင်နိုင်အောင်စားခဲ့တဲ့ သူမျိုးများမဟုတ်ပါ.
Saturday at 1:24am · LikeUnlike · 8 people8 people like this.
မန်းကိုကို May 3, 2011 at 12:35 PM
Mahn Koko ... said ...
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဦးရော်နီညိမ်းရေးတာ (ဘယ်ကလာတယ် မသိပေမယ့်) သဘောကျပါတယ် ။ ကြားနေကျ အမြင်တွေနဲ့ မတူပဲ ၊ ကျယ်ပြန့်ရှည်လျားတဲ့ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွေကို ဖတ်ရတာ မဖြည့်ရသေးတဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဝိုင်းဖြည့်ပေးထားသလိုပါပဲ ။ ခုထိ ဖတ်မိသမျှတွေထဲမှာ အခု ဦးရော်နီညိမ်းရေးတာ တစ်ခု ၊ ဦးဘို(ဘိုကျော်ငြိမ်း) ရေးထားတာတွေနဲ့ ဘိုဘိုလန်းစင်ရဲ့ “ဘဝချင်းမတူတော့သည့် တရုတ်ပြည်” ဆောင်းပါးသုံးပုဒ်ဟာ မြန်မာပြည်အခြေအနေကို3D နဲ့မြင်ရအောင် ပုံဖေါ်ပေးသလိုတောင် တင်စားချင်ပါတယ် ။ တစ်ခုရှိတာက အချက်တွေ အားလုံးကို သဘောတူတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။ သဘောတူတာ အတော်များတာနဲ့ ကျနော်မြင်ဖို့ မစွမ်းသာတဲ့ သမိုင်းနဲ့ယှဉ်တဲ့ အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေ အတော်အသင့် ပါနေလို့ပါ ။ ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးသွားကြတာတွေလည်း ကောင်းကြပါတယ် ။ သဘောကျမိတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ “ဦးနုကို ဘယ်လိုပြောပြော လူထုက မထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး လက်လှမ်းမမှီတာ” ဆိုတာကိုပါ ။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းက ရှိနေခဲ့တာကိုး ။ ဒါနဲ့ ဒီဆောင်းပါးလင့်ကို ဘလော့မှာ ချိတ်ချင်လို့ မူရင်းဘယ်ကလာသလဲ သိချင်ပါတယ် ။ တိုက်ရိုက်ချိတ်လို့ မရရင်တော့ ဒီအတိုင်းကူးပြီး အပေါ်က ဆရာသမားတွေရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပါ သုံးချင်လို့ တခါထဲ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Sunday at 6:03pm · LikeUnlike · 1 person
မဗေဒါ (၈၈) May 4, 2011 at 2:33 AM
ကိုမန်းရေ.. ပို့စ် ကိုသေချာလေးဖတ်သွားတယ်..။ ကိုရော်နယ်ညိမ်း..တုန့်ပြန်ထားရေးထားတဲ့ ` ဦးနုအစိုးရ
ကိုနိုင်ငံတကာ က ထောက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြရင်၊ အဲဒီမှာ ပွဲပြီးသွားပြီ...` ဆိုတာဟာ သုံးသပ်ချက် တခုသာဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုလွဏ်းဆွေ မှန်းသလို ၁ နဲ့ ၁ ပေါင်း နှစ် (၂) ရတယ်လို့ သချာင်္လို အတိ အကျ ဟောကိန်းထုတ်မရခဲ့ဘူး ဆိုတာသိကြမှာပါ..။ အခုက အဲဒီအကြောင်းကို အခြေခံလို့ တုန့်ပြန်ထားတဲ့ အကြောင်းကို နဲနဲ ရေးချင်ပါတယ်.. အဓိကက ဦးနေဝင်းနဲ့ ဦးနုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောရာမှာ ဦးနုဟာ လုံးလုံးငပေါကြီးဖြစ်အောင် အနောက်အမြင်ဆိုတာထက် ကိုညိမ်း အမြင်နဲ့ ငပေါ လုပ်ချင်တာက ကဲသလားလို့ စဉ်းစားမိနေလို့..။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်…ရေးထားတဲ့ လေသံကို မကြိုက်လို့..။
စာရေးဆရာ ဦးချစ်လှိုင် ပြောတာကတော့ သူ (ဦးနေဝင်း) သေခါနီး တရား ရသွားတယ်ဆို တာဟာ ... သူလုပ်ခဲ့တာတွေ မှားတယ်လို့ ဝန်ခံခြင်းလည်း တမျိုးပဲ..။ သူလုပ်ခဲ့သမျှတွေမှာ မတရားတာတွေ အများကြီး ဆိုတာ နိုင်ငံရေးလောကမှာ မထင်မရှား (ထင်ရှား ) ခဲ့တဲ့ သူတွေ သမိုင်းကို ပြောနေကြတာတွေ ရှိ ပါတယ်…။ ...အကြောင်းအရာ တခုကို သုံးသပ်ရာမှာ ကွဲပြားတာတွေ ရှိသလို တူညီတာတွေလည်း ရှိမှာပါ..။ မတူညီတဲ့ အမြင်တခုထဲမှာမှ သူ အာဏာရှင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးဘဝတွေ အများကြီး အများကြီး သေဆုံးခဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ..။ အခုထိ အကျိုးဆက်များ ရှိဆဲ..။
ကိုညိမ်း သုံးသပ်ခဲ့သလို ဦးနေဝင်းဟာ အနောက်ကို စိတ်ကောက်နေတယ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမရှိ စဉ်းစားသင့်တယ်... ဦးနေဝင်းက ဘာကို စိတ်ကောက်ပြီး ဘာကို တင်းခံနေရတာလဲ...အမေရိကန်ကရော ဘာလို့ ချော့ရတာလည်း... ။ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ကြောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဆရာကြီး ( ဆရာကြီးလို့ ပြောတာ အကြောင်းရှိတယ်..ယနေ့အထိ သူတို့ရဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ လုပ်နေတာတွေ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်ဆဲ.. မို့) များက အဲဒီ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်းကတည်းက နှိမ်နှင်းရ… ထောက်ပံ့ရနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေကိုကြောက်လို့ ကုန်ပြောင်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေ မနည်းမနော..။ မဗေဒါတို့နေတဲ့ နော်ဝေးကိုတောင် မီလျှံနဲ့ ချီပေးခဲ့ရတာ..။ ဦးနေဝင်းအကြောင်း ဆက်ရရင် သူ အာဏာရှင် ( တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်း ) ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်သားများက ပေးရမဲ့ အမှတ်များလို့ပဲ ယူဆတယ်... အနောက်က ထောက်ခံသည်ဖြစ်စေ မထောက်ခံသည်ဖြစ်စေပေါ့ .. ( ကွန်မြူနစ်ကို တိုက်တိုင်းလည်း အနောက်က ထောက်ခံခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ် သေချာလည်း မသိနိုင်ဘူး.. )။ သေချာတာ တခုကတော့ အနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးအတွက် မရှိ (ပါ)ရင် ဘာကိုမှ လိုလိုလားလား မလုပ်ချင်ကြလို့ ကွန်မြူနစ် စနစ်ကြီး ... ကျဆုံးခဲ့ရတာ သက်သေရှိတယ်မလား..(ကွန်မြူနစ် စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို တင်ပြခြင်းသာ)..။ ဆိုလိုချင်တာက.. လူတယောက်ခြင်းရဲ့ မတူညီမှု (လိုအင်) ကို မသိတဲ့ စနစ်ဖြစ်တာရယ် ကိုယ်ကျိုး (အတ္တ) ဆိုတဲ့ သက်ရှိများရဲ့ မတူတဲ့ လိုအင်များကို ထည့်တွက်တာ အားနည်းခဲ့တာရယ်လို့ပဲ နားလည်ပါတယ်..။ အနောက်က ဦးနေဝင်းကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်..ချော့ခဲ့ရတယ် ဆိုရင်လည်း …. အာဏာရှင်ဟာ အာဏာရှင် ပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ဦးနေဝင်း ကို ချော့ခဲ့ရတာ ဆိုတာဟာလည်း သူတို့အကျိုးထက် ( အမေရိကန်သည် သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝများတည်ဆောက်ပေးမယ်လို့ ကတိကဝတ်ပြုတဲ့ အခြားသော ပြည်ချစ်သားကြီးထက် ) ဘာမှမပိုတဲ့ သာမာန်လူစိတ်များရှိနေခဲ့ တာ ယနေ့အထိပါပဲ… .။) ... အမြင်ကို ဆက်ဖတ်ချင်ရင်... ပို့စ် မှာ လာဖတ်နိုင်ပါတယ်..
မန်းကိုကို May 4, 2011 at 4:34 PM
ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ပို့စ်ကြောင့် စိတ်ထဲထိခိုက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
ဦးရော်နီရေးတာရော ၊ မဗေဒါရေးတာပါ အတန်အသင့်ရှည်ပြီး အသေးစိတ် တစ်ချက်ချင်း ဆွေးနွေးဖို့ကျတော့ အင်မတန်ရှည်နိုင်တာမို့ လိုရင်းအချို့ကိုပဲ ပြောပြပါရစေ ။
ပထမဦးဆုံး ကျနော် ဦးရော်နီညိမ်းရဲ့စာကို ပို့စ်အဖြစ်တင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာ့အရေး ၊ မြန်မာ့အရေးကို ကိုယ့်ထက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိထားပြီး အတွေ့အကြုံများသူတစ်ဦးရဲ့ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တစ်ရပ်အနေနဲ့ သဘောကျမိလို့ပါ ။
ဒါကြောင့်လည်း “အချက်တွေ အားလုံးကို သဘောတူတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။ သဘောတူတာ အတော်များတာနဲ့ ကျနော်မြင်ဖို့ မစွမ်းသာတဲ့ သမိုင်းနဲ့ယှဉ်တဲ့ အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေ အတော်အသင့် ပါနေလို့ပါ ။” ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ် အကျယ်ထပ်ဖွင့်လို့ရတဲ့ မှတ်ချက်မျိုးကို တမင်ပေးထားခဲ့တာပါ ။
တဆက်ထဲမှာလည်း Zin Than (ခေါ်) ကိုဇင် ဆိုသူရဲ့ “ဦးနုကို ဘယ်လိုပြောပြော လူထုက မထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး လက်လှမ်းမမှီတာ” ဆိုပြီး ပြောထားတာကိုလည်း သဘောကျတယ်လို့ မှတ်ချက် ထပ်ပေးထားပါတယ် ။
အစပျိုးတာလည်း ရှည်သွားပြီ ။
ကျနော့်သဘောကတော့ ၊ အခု မြန်မာပြည်သားတွေထဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ပေးကြရာမှာ အများအားဖြင့် အနီးကပ်အမြင်ကိုပဲ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ကြတာ များတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။ ကုန်ကုန်ပြောရင် ကျနော်လည်း ပါတာပါပဲ ။
အဝေးကြည့်လို့ခေါ်ခေါ် ၊ ဘေးအမြင်လို့ပြောပြော ၊ ပညာရှင်ဆန်ဆန် သုံးသပ်ချက်လို့ အမွမ်းတင်တင် ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အနေအထားနဲ့ တဆင့်တက်ပြီး မြင်ဖို့ သုံးသပ်ဖို့ကျတော့ အလွန်ရှားနေတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဦးရော်နီညိမ်းအမြင်ဟာ ဒီအတန်းအစားထဲ အတန်အသင့် အံဝင်တယ်လို့ သဘောရမိလို့ တင်ခဲ့တာပါပါတယ် ။
သူ့သုံးသပ်ချက်တွေထဲမှာမှ ဦးနုဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ ။ ဆိုလိုတာက သူပုံဖေါ်ထားတဲ့ ပန်ချီကားထဲမှာ ဦးနုဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပေမယ့် အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးထဲက တစ်ခုသာဖြစ်လို့ သူ့နဲ့ သဘောအပြည့်မတူပေမယ့် သဘောကျတယ်လို့ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါက အဝေးကြည့်ကိုး ။
အနီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့် ၊ ဟုတ်ပါတယ် ၊ ပြဿနာ နည်းနည်းရှိလာပါတယ် ။ ပြောရင်တော့ ရှည်ပါလိမ့်မယ် ။ သေချာတာကတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကနေ တက်လာခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့်နဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်နေရာအထိ ရောက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ကို ညံ့တယ်လို့ပြောတာကို လက်မခံနိုင်တာ သဘာဝကျပါတယ် ။ “ငပေါ” ဆိုတာကတော့ စကားလုံးအရွေးများ မှားသွားသလား ၊ တမင်ကို ခပ်နာနာဖြစ်အောင် ရွေးပြောသလားတော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။
တဖက်မှာက တစ်ခုခုလုပ်ရာမှာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ ၊ မေတ္တာစေတနာပြည့်တဲ့ ဦးနုအတွက် အမှတ်လျော့မှာကတော့ အသေအချာပါ ။
ဦးနေဝင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သူဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမှာ အတော်ဆုံးဆိုတာထက် အကွက်မြင်ပြီး သက်ရှိသက်မဲ့တွေကို အသုံးချတတ် ၊ အသုံးချနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး စေတနာမမှန်ခဲ့တာကြောင့် ၊ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာ ဘဝမကူးခင် တန်ပြန်အကျိုး ခံစားသွားရသူ တစ်ဦးလို့သာ ယေဘုယျပြောလိုပါတယ် ။
အမေရိကန်နဲ့ အခြား အရေးပါအရာရောက်တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းလို့ပဲ အတိုဆုံး မှတ်ချက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် ။
(ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့မို့ ထပ်တွေးမိတာရှိရင် ၊ အချိန်ရရင် လာထပ်ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ် ) ။
james May 7, 2011 at 10:20 PM
U Nu did good job for the country although he had
also messed upalot. First, he has given Adman
islands to Nehru's India which was to get arms and ammunition to arm 10 battalions to fight off
insurgencies. So Burma lost strategic islands to
India. Next was he suckered up Arakan MPs and made Buddhism as the state religion which was
an insult to secularism. Burma under Nu and Ne
Win was more secular than other secular countries as even in so called multicultural Malaysia no other religious buildings were allowed apart from mosques. In Saudi Arabia, no churches are allowed to build even if there are Christians. So U Nu declared Buddhism as the state religion and give KIA leaders an excuse
for armed rebellion. U Nu sucked up popularism and Burma got fucked up. I like U Nu especially for his books and he isawitty guy. His wife Daw Mya Yi also made some populist blunders as
she televised after 1988 that if they would get elected they will make sure that one small bag of rice will be back to 15 pyars. That is not
only irresponsible but also insulting as what she should have told is that 'we will try to create jobs, fair pay, investments, fairness of justice, etc..' But old man seems to miss the point. I have mixed feelings for his reclaim for
Prime ministership with legitimacy based on 1960 election results. That could have led to split up of Burma. I think democracy is good, human rights should be respected but splitting
Burma, starting civil war for those abstract and intangible values is not wise. Burma must
become democratic, all citizens (not illegal immigrants) should be equal under the law but
not because democracies is the best but because it is the least worst system on earth.
မန်းကိုကို May 8, 2011 at 11:26 PM
@ James ~ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားက အရေးကြီးတာ အမှန်ပါ ။ ဒါလည်း သဘာဝမို့ ဘယ်လောက်အထိ တဖက်သားအကျိုးစီးပွားကို စဉ်းစားပေးသလဲ ဆိုတာအပါအဝင် ဘက်စုံထည့်တွက် ပေးရပါလိမ့်မယ် ။ သက်သာတဲ့ မကောင်းဆိုးရွား (lesser evil) ကို ရွေးရမှာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးနဲ့ သဘာဝပါပဲ ။
ဦးနုနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကိုယ်လည်း မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက် မဟုတ်လေတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ပြန်ဆွေးနွေးပေးလို့ ရပါလိမ့်မယ် ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဦးသွင်ကိစ္စကို မသိမိတာတော့ အမှန်ပါ ။ ဒါပေမယ့် သိထားသမျှအရ ပြောရရင်တော့ ဦးနုဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် ရှေ့တန်းကပါခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတဲ့အတိုင်း စောဘဦးကြီးနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတောင် ရှိပါတယ် ။ ဦးနေဝင်းနဲ့ ဆိုတာကလည်း ဦးနုနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ လက်တွဲလုပ်ခဲ့တာမို့ ရဲဘော်ရဲဘက်အဆင့် မဟုတ်ရင်တောင်မှ ထောက်ထားစရာ ၊ ထည့်တွက်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။
ထောက်ထားစရာ ၊ ထည့်တွက်စရာတွေ ပြောတဲ့အခါမှာ ၊ (သိထားရတဲ့) ပြည်မက လက်ခံထားကြတဲ့ သမိုင်းကို အခြေခံပြီး ပြောတာပါ ။ ပင်မ သမိုင်းလို့ ဆိုကြပါစို့ ။ ဒီနေရာမှာလည်း အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို ခုထိ အားလုံးမသိနိုင် ကြရတာကလည်း ထည့်တွက်စရာတစ်ခုပါ ။
တဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမြင် အသိတွေအပါအဝင် ၊ အခြား ပင်မသမိုင်းပုံရိပ်နဲ့ မကိုက်ညီတာတွေကို ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မပြုခဲ့တာ ၊ ဖေါ်ထုတ်ဖို့ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြတာတွေကို တချိန်မှာတော့ ပြန်ချိန်ညှိနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
မန်းကိုကို May 8, 2011 at 11:27 PM
@ Anonymous ~ ဦးနု တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းခဲ့တာမှန်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အပေါ်က ပြောခဲ့သလို ပင်မသမိုင်းအဖြစ် လက်ခံထားကြတဲ့အရပေါ့နော ။
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် ။ တစ်ခုကတော့ “လွတ်လပ်ရေးဟာ တကယ်ပဲ တန်ဖိုးရှိသလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်စောပြီး ယူခဲ့မိသလား” ဆိုတာနဲ့ အစချီမယ့် ဆွေးနွေးချက်တွေပါ ။ တချိန် မြန်မာပြည်မှာ အနည်ထိုင်လာပြီး ၊ ပညာ ဗဟုသုတတွေ ကြွယ်ဝလာပြီး ၊ ပြည်သူပြည်သား အများစုတွေ ရင့်ကျက်လာတဲ့တနေ့မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအစ ဝေဖန်ဆန်းစစ် ပိုင်းခြားမှု မှတ်ကျောက်တွေနဲ့ အပွတ်ခံကြရမှာပါ ။ အဲဒီကျရင်တော့ လက်ရှိပင်မ မြန်မာ့သမိုင်းဆိုတာဟာ ကိုင်းဖျားကိုင်းနား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ်တွေအလိုကျ ငါ့စကားနွားရ ပြောတာမျိုးတွေကို မဆိုလိုပါဘူး ။
ထားပါတော့ ၊ ပြန်ဆက်ရရင် အက်ဒမန်ကျွန်းစု ကိစ္စကို ခုမှပိုပြီး တိတိကျကျ အစတစ်စ ရလာသလို ဖြစ်မိတာပါ ။ အရင်က “အိန္ဒိယနယ်မြေဟာ ဘယ့်နှယ် မြန်မာပြည်အောက်နားမှာ လာရောက်နေသလဲ” ဆိုပြီး အဖြေရှာမတတ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ (ညံ့တယ်ပြောလည်း ခံရမှာပါပဲ) ။ နောက်တစ်ခု - ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ လုပ်ဖို့ကိစ္စကတော့ အတော်လေး ရုပ်ပျက်သွားတယ် ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ် ။ အခြားဟာတွေကတော့ အများသိကြသလို နိုင်ငံအာဏာကို ဦးနေဝင်းနဲ့ ပလာတာရိုက်ကြတာ အပါအဝင် အများကြီးပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အတော်များများဟာ ကျနော့်စိတ်ထဲတော့ သိပ်ဘဝင်မကျသေးပါ ။ ဆိုချင်တာက ဒါတွေဟာ အပြည့်အစုံ အတိအကျရယ်လို့ စိတ်ထဲဒုံးဒုံးချလောက်အောင် ယုံကြည်မှု အားရမှု မရှိသေးတာကိုပါ ။
မလေးရှားဆိုလို့ မလေးရှားဟာ တဝက်တပျက် ဒီမိုကရေစီ ၊ မလေးလူမျိုး အဓိကဝါဒနဲ့ အရေခြုံ လူမျိုး ယဉ်ကျေးမှုစုံနိုင်ငံပါ ။ အဲဒီမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စဉ်ကတော့ အထင်ကြီး သဘောကျမိခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ့်နိုင်ငံထက် သာတာကိုး ။ အဝေးကြည့် ကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျမှ သူတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေထဲမှာမှ ပညာတတ်တွေရှိရာမှာ ဒီလူတွေရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေ ပင်မသတင်း ရေစီးကြောင်းထဲ မဝင်နိုင် ၊ မဖြန့်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေကို မြင်လာရပါတယ် ။ ထိုင်းနိုင်ငံလည်း ထို့လည်း၎င်းပါပဲ ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့ဇနီးရဲ့ TV မှာ ပြောသွားတာကို နားထောင်ဖူးပါတယ် ။ ကြားတုန်းကတော့ ဆန်တစ်ပြည် ငါးမူး ၊ ဆီတစ်ပိဿာ ၂ ကျပ်ခွဲတွေ လျှောက်ပြောတော့ အတော်ကြောင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိဖူးပါတယ် ။ အမှန်မှာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးကို နားကန်းတစ်လုံးမှမသိတာ ၊ ခေတ်ဟောင်းနိုင်ငံရေးကို မသိ မမှီတာ ၊ ဦးနုထောင်ထဲ ရောက်နေချိန်ဖြစ်တာတွေကို ထည့်မတွက်တတ်ခဲ့မိပါဘူး ။ သတိထားမိခဲ့တာက ၊ ပါတီတွေကို အချိန်လုံလုံလောက်လောက် မပေးပဲ အငိုက်ဖမ်းတာ ၊ TV အချိန် ၃-၄-၅ မိနစ်အတွင်းကို အတင်းတွန်းထည့်ပြီး ရုပ်ပျက်အောင် လုပ်တာတွေနဲ့ အခြား မရိုးသား မမှန်ကန်မှုတွေကိုပါ ။
ဦးနုအနေနဲ့ ပြည်သူကို ထိတွေနိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာ အကန့်အသတ် ၊ ငွေရေးကြေးရေး ၊ နိုင်ငံရေး အသိ ဗဟုသုတ ပျံ့နှံ့မှု စတာတွေနဲ့ ထည့်တွက်စရာတွေက အများကြီးမို့ ၊ အပေါ်မှာ “ဦးနုကို ဘယ်လိုပြောပြော လူထုက မထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး လက်လှမ်းမမှီတာ” ဆိုတဲ့ စကားကို ထောက်ခံခဲ့တာပါ ။ ဒီနေရာမှာလည်း ဒီစာကြောင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး နားလည်မှုတွေက ကွဲနိုင်ပါသေးတယ် ။
Anonymous ပြောတဲ့အထဲက “not because democracies is the best but because it is the least worst system on earth” ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ မှန်တယ်လို့ ထောက်ခံချင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် ကွဲပြဲမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုကိုတော့ နားလည်လို့ မရသလို ၊ တရားမဝင် ဆိုသူတွေကိလည်း ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပြီး ကွဲပြား ခွဲခြားမလဲဆိုတာ မပြောတတ်ပါဘူး ။
သေချာတာကတော့ မြန်မာပြည်ဟာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းတွေအပေါ် သရုပ်ပျက်တာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ တရုတ်နဲ့ ကုလားတို့လို လူမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်း မကောင်းခဲ့တဲ့ (အချို့နေရာမှာ လူမဆန်ခဲ့ဘူး လို့တောင် ပြောလို့ရနိုင်မယ့်) သမိုင်းတွေကတော့ ဖေါ်ထုတ်ခွင့် မရသေးပေမယ့် ၊ ကာလဝိပတ် နောက်ပိုးတက်တာကိုတော့ ရှောင်လွဲလို့ မရနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲ ပြောရမလားပါပဲ ။
It is not only Burmese problem but also issues for every country. An average Burmese has no
hard feelings towards an average Karen. In fact,
if all things equal, Burmese trustaKaren more
than another Burmese. AsaBurmese, I feel bad
for atrocities of Burmese army during KNU KNLA's Irrawaddy delta penetration campaign
via sea. I was told byaKaren friend about stories that Karen young men were tortured
for alleged assistance to KNLA. I understand
those who were tortured might have helped
their betheren, Burmese army personnel might
have done cruel tactics to get information.
But KNLA will do same for Burmese soldiers.
In TIME magazine, there was an article about
a young Karen soldier who servers head of captured Burmese soldier. No one likes war
but this problem will not go away even if
we naively believe that we can give KNU autonomy. KNU seems not keen on working
with Burmese. No Burmese loves those civil
war, but we are not living in perfect world.
Some naive Burmese will think KNU is good
but KNU is not led by saints either. They
have corrupted crooks like Burmese army do.
Family members of KNU top brass smuggle precious gems and Burmese (and Shan) girls
in Bangkok to Hadyi (Thai-Malaysia border). Like Burmese army have good guys, there may
be some good guys in KNU,alot of them are
in DKBA. But race, like religion, is still
an issue and will be an issue. Sickening to
see news that portray KNU as an organization
of saints and martyrs. Bull shits! They are
the same shit like Burmese army. The only viable solution for Burma and Burmese (Karen
included) is to ally with DKBA, subdue KNU
until it comes to negotiation and rebuild
မန်းကိုကို July 11, 2011 at 10:59 AM
Anonymous ရဲ့မှတ်ချက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မအားမလပ်လို့ အခုမှစာပြန်နိုင်တာဖြစ်သလို ၊ ဒီတစ်ခါ ရေးထားတာတွေဟာလဲ အရင်မှတ်ချက်တွေမှာလိုပဲ Anonymous ရဲ့ “အထင်” တွေကို ထင်ဟပ်နေတာမို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်လာနိုင်လေးအချို့ကို ကျနော်သိတာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြချင်လို့ပါ ။
၁။ “Family members of KNU top brass smuggle precious gems and Burmese (and Shan) girls in Bangkok to Hadyi (Thai-Malaysia border).”
၂။ “there may be some good guys in KNU,alot of them are in DKBA.”
၃။ “The only viable solution for Burma and Burmese (Karen included) is to ally with DKBA, subdue KNU until it comes to negotiation and rebuild inter-race relationships.”
၁။ ဒီကိစ္စကတော့ အရင်တစ်ခါ Anonymous ပြောခဲ့တဲ့ KNU ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သားတစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး အထင်ကိုပြောတာလို့ နားလည်မိပါတယ် ။ ရွှေ ၊ သတ္တု ၊ ကျောက်မျက် စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေ လိုအပ်သလို လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေ ရှိပါတယ် ။ တရားဝင် မဝင်ဆိုတာကတော့ ကြည့်မြင်မှုနဲ့ နားလည်ရပ်တည်တဲ့ အနေအထားက အဖြေပေးပါတယ် ။ မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာက တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖြေတွေပါ ။
ပြောခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သားတစ်ယောက်ထဲကို မူတည်ပြီးပြောရင် ၊ ဆန်ပိုးတစ်ကောင်ကြောင့် စပါးတစ်ကျီလုံး ပျက်နေပါပြီလို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပါ့မယ် ။ တဆက်ထဲမှာပဲ အဲဒီဗိုလ်မှူးကြီးဆိုသူက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပြောပြနိုင်ရင် ၊ အခုဖုန်းတစ်ချက် ဆက်လိုက်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ် ။ တစ်ခုရှိတာက မိဘတွေမရှိတော့လို့ လမ်းပျောက်ပြီး ဝင်ငွေရအောင် လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်များလား ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ ၊ hat-yai ဆိုတာ ကျနော့်နဲ့ မစိမ်းသလို ၊ လမ်းမယူတဲ့ပဲ အပြင်ရောက်နေတဲ့ KNU အရာရှိသားတွေဆိုတာလည်း လက်ချိုးရေလို့ ရတဲ့ကိစ္စမို့ပါ ။
နောက်တစ်ချက်က KNU ရဲ့ တရားဝင် ပေါ်လစီမှတ်တမ်းအချို့ ကျနော့်လက်ထဲမှာကို (လိုချင်ချင် မလိုချင်ချင်) ရထားပါတယ် ။ ကောင်းကွက်တွေနဲ့ လူတိုင်းကြိုက်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်မယ့် အချက်တွေ ပါတာတော့ သေချာပါတယ် ။ ဒီလို အခြေခိုင်မာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမို့လို့ ရှေ့ကပို့တစ်ခုမှာ ရေးထားသလို ၊ KNU မှာ အထက်ပိုင်းတာဝန်တွေ ယူထားတဲ့ အဖိုးမန်းစတီးလာ တို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတော်များများက DKBA နဲ့ သွားမပေါင်းခဲ့တာပါ ။
၂။ အပေါ်ကပြောခဲ့သလို (နိုင်ငံရေး) ပေါ်လစီနဲ့ ဦးတည်ရည်မှန်းချက်တွေ နည်းပါးတဲ့ DKBA ဟာ အခြားအားနည်းချက်တွေလည်း ရှိသေးပေမယ့် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်မထောင်းချင်တော့ပါဘူး ။ သေချာတာကတော့ သူတို့က မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ KNU ထက် လူကောင်းပိုများပါတယ် ဆိုရင်တော့ အင်း ... လူအတော်များများကြားမှာ research လုပ်ကြည့်တာက အဖြေပိုကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။
၃။ နောက်ဆုံးနံပါတ်သုံး အချက်ကတော့ မှားတယ် ၊ မှန်တယ် မပြောလိုပေမယ့် Anonymous ရဲ့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲနေတာတွေကို ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာလို့ မြင်ပါတယ် ။
လူးသာလွန့်သာ သိပ်မရှိတဲ့ DKBA တွေကို အသုံးချဖို့ကတော့ နည်းနည်းပိုလွယ်တဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည် စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ရဲ့ အလုံးစုံ အနိုင်ရရေး စိတ်အခြေခံမျိုးနဲ့ကတော့ လိုချင်တဲ့ ၊ လိုအပ်တဲ့ ၊ ဖြစ်သင့်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမျိုးဟာ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါပဲ ။ KNU က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးဖို့ လုံးဝမကြိုးစားခဲ့ဘူးလို့ Anonymous ထင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ၊ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်နဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရလောက်အောင် ကြိုးစားမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ပြည်မ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ “မင်းတို့ လုံးဝလက်နက်ချ အရှူံးပေးရင် ၊ မင်းတို့ကို ငါတို့ ချမ်းသာပေးကောင်း ချမ်းသာပေးမယ်” ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကနေ ခွဲထွက်ပြီး ၊ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးကို စေတနာမှန်မှန်နဲ့လုပ်ရင် လက်ဖျောက်တီးတာကမှ အသံထွက်ဖို့ ပိုခက်တဲ့အလုပ် ဖြစ်သွားမှာပါ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ၊ အတိုချုပ် ပြောပြဆွေးနွေးဖို့ အခွင့်အလမ်း ဖြစ်လာတာကပဲ ၊ ကောင်းတဲ့ ဦးတည်ရာတစ်ခုပါ ။ Anonymous အမြင်မှာ ဝိရောဓိဖြစ်နေတာတွေ ပါနေပေမယ့် အချို့နေရာတွေမှာတော့ စိတ်ရှင်းသွားဖို့ မျှော်လင့်မိတာပါပဲ ။